Global Voices teny Malagasy » Japana Sy Korea Atsimo : Mahatezitra Ireo Akanga Sisa Nanamborana Ilay Fifanarahana Manantantara Momba Ireo “Vehivavy Fampiononana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Janoary 2016 16:22 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Nancy
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Ireo akanga sisa nanamboran'ny vehivavy fampiononana mivory manoloana ny masoivoho Japoney any Seoul, Aogositra 2011. Sary avy amin'ny Wikipedia .
Tahaka ny vita tamin'ny 28 Desambra 2015 ny fifanarahana  teo amin'ny governemantan'i Japana sy Korea Atsimo ho famahàna ” tanteraka sy tsy azo ivalozana”  ireo olana momba ireo “vehivavy fampiononana”. Na izany aza, raha jerena amin'ny fihetsik'ireo akanga sisa nanamborana tamin'ireo vehivavy fampiononana izy tenany, dia ny fitsaboana ny fifandraisana eo amin'ny governemanta roa tonta no tanjon'ilay fifanarahan'ny Desambra 2015 fa tsy ny hanasitranana ny ratran'ny lasa.
Tamin'ny ady lehibe faharoa, vehivavy hatramin'ny 200.000  avy tamina firenena maherin'ny folo nanerana an'i Azia no noterena ho amin'ny fanandevozana ara-pananahana  tamin'ireo Tafiky ny Fanjakana Japoney. Amin'ny fiteny Japoney, notsotsorina hoe ianfu (vehivavy fampiononana ) no fiantso ireo vehivavy fototry ny olana ara-politika hatry ny ela ireo.
Arak'ilay fifanarahana Desambra 2015, dia “naneho ny fialantsininy sy ny fifonany tamin'ny fo madio tamin'ireo vehivavy rehetra izay niaritra ny maharary sy fiainana tsy azo sainina ary niaritra ratra ara-batana sy ara-tsaina tsy azo sitranina tamin'ny naha-vehivavy fampiononana azy” ny Praiminisitra Japoney  Shinzo Abe.
Malaza noho ny antony roa ilay fialàntsinin'ny Piraiminisitra Abe. Na dia efa samy nanao fanambaràna fiaikena aza ny Piraiminisitra  Japoney teo aloha Murayama Tomiichi  sy ny minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha tamin'ny 1995 (faha-50 taonan'ny fifaranan'ny ady lehibe faharoa) fa noterena ho amin'ny fanandevozana ara-pananahana  ireo vehivavy nanerana an'i Azia, dia noraisin'ny Korea sy ireo firenena sasany voakasiky ny olana ho fialantsinin'ny olona manokana izany fa tsy fialantsiny ôfisialin'ny governemanta. 
Ampahany amin'io fifanarahana io, nanokana vola 1 lavitrisa ¥  ( 8.3 million  dolara amerikana)  ny governemanta Japoney ho an'ireo vehivavy fampiononana, Koreana Tatsimo, 46  sisa velona. Tsy naka ny hevitr'ireo vehivavy ireo sy ny fianakaviany ny governemanta Koreana Tatsimo talohan'ny nanaovany ilay fifanarahana tamin'i Japana, hany ka nisy ny fihetsika mahery.
Ao aminà lahatsary voajery in-587.000 mahery amin'izao fotoana izao , tamin'ny 29 Desambra, ny ampitson'ny nahavitan'ilay fifanarahan’ i Japana sy Korea Tatsimo, nifandona taminà vehivavy fampiononana taloha iray sisa velona tsy fantatra anarana ny lefitry ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Koreana Tatsimo Sung Nam-Lin.
Dikasarinà fàfana avy amin'ny lahatsarin'ny  CBS Notcutnews, naparitaka be tamin'ny haino aman-jery sosialy. Fanazavana amin'ny teny Anglisy nataon'i Hyun-Soo Lim.
Namoaka fanambaràna  manameloka ilay fifanarahana ny filànkevitra Koreana ho an'ireo vehivavy voantso tamin'ny fanandevozana ara-pananahana nataon'ny tafika Japoney : 
Ilay tsangambaton'ny fandriampahalemana manoloana ny masoivohon'i Japana any Seoul dia sarivonganà vehivavy fampiononana vita amin'ny alimo, ary iray monja ihany amin'ireo tsangambaton'ny fandriampahalemana manerantany natokana ho an'ny vehivavy fampiononana. Amin'ny ankapobeny dia miteraka adihevitra  foana ireny sarivongana ireny na aiza na aiza misy azy manerantany .
Amin'ny ankapobeny dia mankasitraka ilay fifanarahana ny any Japana. Nankasitrahan'ny Praiminisitra Japoney teo aloha Murayama Tomiichi  ilay fifanarahana,  ny mpitarika ny antoko Kominista Japoney Shii Kazuo, izay nanakiana mafy hatry ny ela ny fandaharam-potoanan'i Abe kosa nilaza fa “namerina ny fahamendrehana sy ny fanajàna”  ireo vehivavy fampiononana ilay fifanarahana.
Nifidy ny haino aman-jery sosialy ireo olon-tsotra japoney sasany mba hanamafisana fa tsy noteren'ny  tafi-panjakana Japoney mihitsy  — sy ny governemanta Japoney raha hitarina — ireo vehivavy fampiononana ireo fa nantsoinà mpandraharaha tsy miankina izay hany tompon'andraikitra tamin'ny toe-javatra nampihoron-koditra aminà herisetra sy ny sarintsarinà fanandevozana niaretan'ireo vehivavy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/07/78044/
 Sary avy amin'ny Wikipedia: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E5%AE%B9%E6%B4%99#/media/File:Comfort_Women,_rally_in_front_of_the_Japanese_Embassy_in_Seoul,_August_2011_(2).jpg
 Tahaka ny vita : http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000366.html
 ” tanteraka sy tsy azo ivalozana”: http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/12/250874.htm
 vehivavy hatramin'ny 200.000: http://www.japanfocus.org/-Asia-Pacific%20Journal-Feature/4829/article.html
 firenena maherin'ny folo : http://www.reuters.com/article/us-philippines-japan-comfortwomen-idUSKBN0UK12O20160106
 noterena ho amin'ny fanandevozana ara-pananahana: https://globalvoices.org/2015/03/08/denying-japans-responsibility-for-wwii-sex-slaves-only-makes-japan-look-worse/
 ianfu (vehivavy fampiononana ) : http://en.wikipedia.org/wiki/Comfort_women
 noterena ho amin'ny fanandevozana ara-pananahana: https://en.wikipedia.org/wiki/Kono_Statement
 tsy fialantsiny ôfisialin'ny governemanta.: http://thediplomat.com/2015/12/japan-south-korea-reach-agreement-on-comfort-women/
 vola 1 lavitrisa : http://koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2016/01/137_194708.html
 Tsy naka ny hevitr'ireo : http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/724116.html
 Ao aminà lahatsary voajery in-587.000 mahery amin'izao fotoana izao: https://www.facebook.com/nocutnews/videos/947278581974022/?permPage=1
 filànkevitra Koreana ho an'ireo vehivavy voantso tamin'ny fanandevozana ara-pananahana nataon'ny tafika Japoney :: https://www.womenandwar.net/contents/general/general.nx?page_str_menu=2101
 fandriampahalemana manerantany : http://peace.maripo.com/p_comfort_women.htm
 miteraka adihevitra: http://www.dailynews.com/general-news/20140418/glendale-comfort-women-statue-controversy-goes-to-us-district-court
 Nankasitrahan'ny : http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS28H5X_Y5A221C1PE8000/
 izay nanakiana mafy hatry ny ela : https://globalvoices.org/2015/05/31/what-does-abes-ignorance-of-the-potsdam-declaration-actually-mean/
 hanamafisana fa tsy noteren'ny: https://www.youtube.com/watch?v=9bOw0uhgfrY
 nantsoinà mpandraharaha tsy miankina : http://www.nytimes.com/2015/12/19/world/asia/south-korea-comfort-women-park-yu-ha.html